FIFA WORLD CUP 2014: Xulka Brazil oo guul ku daah furay Koobka Aduunka (SAWIRRO)
Friday June 13, 2014 - 16:17:52 in Sports by Web Admin
Magaalada Sao Paulo ee Dalka Brazil ayaa waxaa caawa si rasmi ah uga furmay tartanka koobka Aduunka ee 2014, waxaana lagu daah furay xulalka Brazil iyo Croatia.
Xulka marti gelinya koobka Aduunka ee Brazil ayaa kulanki ugu horreeyay ee lagu daah furay koobka Aduunka guulgaaray, kadib marki ay 3-1 kaga adkaadeen xulka Croatia.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay dardar labada xul, waxaana xulka marti gelinaya koobka ee Brazil uu garoonka lasoo galay inuu maamulo kubadda, iyagoona xoogga saaraya dhinaca weerarka.
Cayaartoyda Croatia ayaa weerar kontorol attac- ah ay daqiiqadihi horre soo qaadeen u sahlay inay gool helaan, marki daafaca xulka Brazil ee Marcelo uu shaqaba xulkiisa ku taabtay kubad ka timid weeraryahanka xulka Croatia Ivica Olic.
Marcelo ayaa noqonaya ciyaaryahanki labaad ee xulkiisa gool ka dhaliyo kulanka ugu horreeyo ee koobka Aduunka, iyadoo sidoo kale uu noqonayo ciyaaryahanki ugu horreeyay ee qaranka Brazil ee gool iska dhaliyo koobka Aduunka.
Neymar ayaa soo bar-bareeyay xulka Croatia, marki uu goolka koowaad u dhaliyay xulkiisa Brazil daqiiqadii 21-aad ee bilaawgi cayaarta.
Intaas kadib cayaartoyda xulka Croatia ayaa iyagu dejiyay weerarki,kadib cadaadis xoog le oo uga imaanayay cayaartoyda Brazil, waxaana Brazil ay heshay fursad ay hogaanka ku qabato, marki loo dhigay Rigooro, iyadoo rigooradaasina uu gool u badalay weeraryahanka qarankaasi Brazil ee Neymar daqiiqadii 70-aad.
Goolka saddexaad xulka Brazil waxaa u dhaliyay ciyaaryahankeeda garabka uga ciyaara ee Oscer daqiiqadii 90-aad ee dhammaadki cayaarta.
Ciyaarta ayaana kusoo idlaatay 3-1 oo ay guusha raacday xulka Qaranka Brazil, waxaana guusha uu xalay gaaray u sahlayaa inuu hogaanka u haayo Group-ka A.
Mustafa Xasan Cali
Calnka Sports Team
28/06/2021 - 21:43:43
Somali reporters seek greater protection ahead of World Press Freedom Day
30/04/2021 - 13:28:52
Aduunka oo qeylo dhaan kasoo saaray rabshadaha Muqdisho
26/04/2021 - 15:21:19
22/03/2020 - 19:01:36
29/02/2020 - 11:33:17
Turkiga oo albaabada ufuray utahriibayaasha Qaarada Yurub
29/02/2020 - 11:33:16